Daawo Sawirada Muwaadin Somaaliyeed oo Mag dhow u helay in Kabadan 3 Milyan balse iska diidan… – HORNAFRIC MEDIA
Xaashi Cumar Xasan oo ah Muwaadin Soomaaliyeed oo in ka badan 17-sano ku xirnaa xabsi kuyaala dalka Talyaaniga ayaa iska diiday lacag dhan 3,181 malyan oo euro oo magdhaw ahaan ugu xukuntay Maxkamada Perugia ee dalka Talyaaniga.
Muwaadinkan Soomaaliyeed ayaa ku xirnaa xabsi lagu xiro Maafiyada Talyaaniga mudo 17-sano ah , waxaana lagu soo eedeeyay in uu wax ka malageegay dil Muqdisho loogu geestay Gabar Wariye ah iyo Sawir Qaade u dhashay Talyaaniga.
Waxa uu sheegay Xaashi Cumar in uusan ku qanacsaneyn lacagta magdhawda ah ee Dowlada Talyaaniga u xukuntay, waxa uuna tilmaamay in lacagtaasi mid ka badan uu xaq u leeyahay.
Xasan Cumar oo ku sugan dalka Holand ayaa sheegay in uu dib ugu laabanayo dalka Talyaaniga si uu racfaan uga qaato lacagta magdhaw ahaanta loogu xukumay, waxa uuna xusay in lacagtaasi ay tahay mid aad u yar oon u qalmin.
” Talyaaniga ayaan ku laabanayaa magdhaw ayaana ka qaadanayaa lacagta la ii xukumay oo ah mid aad u yar, Talyaaniga mudo ka badan 17-sano ayaaan sharci daro ugu xirnaa ,waxaa la ii xisaabiyay oo kaliya maalmihii aan xirnaa balse waxaa maqan xuquuqyo kale oo aan leeyahay ” Ayuu yiri ayuu yiri Xaashi Cumar Xasan.
Xaashi Cumar Xasan, ayaa dalka Talyaaniga loo geeyay si shirqool ah bishii January ee sanadkii 1998-kii, waxaana Xaashi lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay dilka Ilaria Alpi oo katirsaneyd Warbaahinta RAI ee dalka Talyaaniga iyo sawir qaade Milan Hrovatin.